जाजरकोटमा जिप दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
जाजरकोटमा जिप दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु
भाद्र २९, २०७८ हरिहरसिंह राठौर
जाजरकोट — जाजरकोटमा मंगलबार अपरान्ह जिप दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । बारेकोटबाट खलंगातर्फ आउँदै गरेको भे १ ज ९८७ नम्बरको जिप नलगाड ५ को गेरेनी भीरमा दुघर्टना हुँदा दुई जनाको ज्यान गएको हो । दुघर्टनामा ५ जना घाइते भएका छन् ।
खारा-गेरेनी सडकखण्डको गेरेनी भन्ने ठाउँमा दुर्घटना हुँदा बारेकोट २ की ३२ वर्षीया शान्ति रोकाय र जुम्ला निवासी अन्दाजी ५५ वर्षीय मंगल महतारा भएको प्रहरीले जनाएको छ । घाइतेको इलाका स्वास्थ्य कार्यालय दल्लीमा उपचार भइरहेको छ ।
घाइते पाँचमध्ये चार जनाको अवस्था गम्भीर रहेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख डिएसपी मधुकुमार थापाले बताए । स्थानीय बासिन्दा सम्मान रावलका अनुसार महतारा जाजरकोटमा जडिबुटी व्यापारीको रुपमा आएका थिए । जिप सडकमै पल्टिएको उनले बताए ।
जिपको ब्रेक फेल हुँदा खाल्डाखुल्डी सडकमा पल्टिएर दुर्घटना भएको प्रहरी प्रमुख थापाको भनाइ छ । चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
प्रकाशित : भाद्र २९, २०७८ १६:२८
'सभामुखले बैठक आऊ भनेर औपचारिकता पूरा गर्दा हामी जानुको कुनै अर्थ छ ?'
काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले सभामुखप्रति आफूहरुको आशंका कायम रहेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसाग कुरा गर्दै उपनेता नेम्वाङले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमालेमाथि भेदभाव गरेकाले उनीप्रति आशंका भएको बताएका हुन् ।
नेम्वाङले सभामुखले औपचारिकताको लागि बोलाएको बैठकमा जानुको अर्थ नभएको भन्दै उनले आफूहरुले सभामुखलाई लगाएको आरोपलाई सभामुखले पुछ्नुपर्ने बताए । सभामुखबाट शंका निवारणको लागि कुनै प्रयास नभएको पनि उनले बताए । उनले भने, ‘हामीसँग भेदभाव गरियो । प्रमुख प्रतिपक्षलाई भेदभाव गरियो भन्ने भान परेको छ । त्यो शंका निवारणको लागि कुनै प्रयास भइरहेको छैन । सभामुखमाथि हाम्रो आशंका छ । सभामुखजीले ल आऊ बैठक भनेर औपचारिकता पूरा गर्दा हामी जानुको कुनै अर्थ छ ? हाम्रो यो आरोप छ यो आरोपलाई तपाईंहरु पुछ्नुस् ।’
उनले सत्तापक्षको ढंग नपुगेका कारण संसद्‌मा अहिलेको अवस्था आएको टिप्पणी गरे । प्रतिपक्षलाई राज्यको अभिन्न अंग मानेर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
प्रकाशित : भाद्र २९, २०७८ १६:१९
सल्यानमा अटो दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु
संक्रमितहरू होम आइसोलेसनमा
कर्णालीमा दुर्घटनाले ३ वर्षमा ४ सय ३२ को मृत्यु
खेत मासेर बजार
४० क्वीन्टल जडीबुटीसहित दुई ट्र्याक्टर नियन्त्रणमा